रिलायन्सको संस्थापक सेयर लिलामीमा भोलीदेखी आउंदै, क-कसले पाइन्छ भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » रिलायन्सको संस्थापक सेयर लिलामीमा भोलीदेखी आउंदै, क-कसले पाइन्छ भर्न ?
काठमाडौं - चैत २६ गतेदेखि रिलायन्स फाइनान्सले संस्थापक समूहको ५ लाख ३५ हजार ३१४.५२ कित्ता सेयर लिलामी बिक्री खुला गर्दैछ । यसअघि चैत १ देखि ८ गतेसम्म पनि यही संख्यामा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको १ लाख १० हजार ६२६.०८ कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याएको थियो ।
तर त्यस अवधिमा संस्थापक समूहबाट आवेदन नपरेपछि फेरि लिलामी गर्न लागिएको हो । यसपटक भने यो संस्थापक सेयरमा सर्वसाधारणले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । लिलामी वैशाख ३ गतेसम्ममा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम १ हजार कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल कमलपोखरी, काठमाडौंलगायत सनराइज बैंकका विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी, रिलायन्स फाइनान्सको पोखरा, नारायणगढ, बनेपा र झापाको चारआली शाखाबाट पनि लिलामी भर्न सक्ने व्यवस्था छ । लिलामीमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । लगानीकर्ताले सर्वसाधारणतर्फ न्यूनतम १०० कित्ता र संस्थापकतर्फ न्यूनतम १००० कित्तादेखि अधिकतम सबै सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्रकाशित : Sunday, April 08, 2018